Adeegyadeena – Advokatbyrån Divinius
JURISTBYRÅN DIVINIUSAdeegga Tayada ugu Fiican
iyo talo sharci
JURISTBYRÅN DIVINIUSHogaamiye Goboleed
dhaqanka sharciga ah
JURISTBYRÅN DIVINIUSWaan ku faraxsanahay
AdeegyadeenaSidee baan kuu caawin karnaa?
Anaga waxaa ku shaqo leenahay arrimaha quseyo sharciyada bulshada, sida camala dhaqaalaha, xuquuqda qoysaska, xuquuqda magangelyodoonka iyo daryeelida qasabka ah. Adiga waxaad warbixin kale oo adeegyadeena ku saabsan ka akhrisankartaa hoostaan.
Qeybsasho hanti guri
Markoo guurka ama isla wada noolanshada ey dhammaato caadiyan waa in la suubiyaa kala qeybsasho hanti guri. Haddii aad ku wada heshiiseen sida hantida guriga loo kala qeybsanaayo anaga waxaa idin ka caawin suubinta wada heshiinta hanti qeybsashada. Haddii idinka aadan ku wada heshiin karin adiga waa nala soo xiriiri sidaa u heshid qof adiga ku matalo markey noqoto khilaafka hanti qeybsashada.
Xuquuqda guri iska lahaanshada
Sharciga quseeyo xuquuqda guri iska lahaanshada wuxuu leeyahay shuruudo adag markey noqoto qofkale ku wareejinta hanti oo iska lahaansho guri. Wareejinta hanti noocaas waxeey suurtagal tahay haddii wax la kala iibsan, sadaqo iyo kala qeybsasho hanti guri. Kala wareegsashada nooca uu dooni ah ahaado, waxaa jiro dhowr wax oo loo baahanyahay in laga fiirsado, oo koow ka tahay saameynta canshuur bixinta. Nala soo xiriir sidaa warbixin kale ku siino.
Miyaa adiga laguu soo diray warqad oo soo bixin deyn oo adiga u aragtid iney qalad tahay? Ma dhicikarta in Wakaalada deyn soo uruurinta arrinta ku shaqo leedahay? Haddii ey sidaa tahay adiga soo dhawoow oo nala soo xiriir sidaa u heshid qof adiga ku matalo markey noqoto khilaafkaan.
Qofkii haysto wakiilnimo wuxuu xaq u leeyahay qofka kale inuu matalikaro. Xaqaas oo wakiilnimada waxey ku ekaan kartaa waxyaabaha qaarkood ama muddo gaaban. Nala soo xiriir sidaa warbixin kale kaaga siino wakhtiyada ey wanaagsantahay in la suubisto wakiilnimo iyo sababta.
Warqad sadaqo bixinta
Micnaha sadaqo waa qof (sadaqo bixiyahay) si xoriyad ku wareejin hanti qofkale (sadaqo qaatahe). Sadaqada waxaa la bixin kara ayaado laga bixineyn xaq siin ama laga bixin xaq siin la go’aamiyay. Nala soo xiriir sida warbixin kale kaaga siino. Haddii aad dooneysid anaga waa ka caawin suubinta warqada sadaqo bixinta sidey mid sharciga waafaqsan uu noqoto.
Sharciyada quseeyo dadka curyaamiinta waxaa loo dareemi kara iney yahiin kuwo adag sida lagu fahmo. Haddii adiga iyo degmada ama Qasnada caymiska aad aragti kala duwan ka qabtiin heerka lacagta iyo/ama lacagta kaalmada, fadlan adiga nala soo xiriir sidaa ugu suubino qof ku matalo.
Qiimaha ey leedahay xuquuqda magangelyodoonka aad bey usoo badatahay sanadyadii ugu dambeeyay. Anaga waxaa qabanaa shaqooyinka qareen u noqoshada dadka oo dalabkaas ka imaado Hay’adda socdaalka iyo markey noqoto inaa wakiil u noqono adiga oo dooni inaa codsatid ruqsadda shaqada ama dooni in qoyskaada kuugu imaado Iswiidhan. Nala soo xiriir haddii adiga aad dooneysid inaa ku matalno markey noqoto arrimaha xuquuqda magangelyodoonka.
Miyaa adiga dambi lagaa galay ama weeysay qof ehelkaada oo gacan ka xaq daran dishay? Haddii sidaa tahay adiga waxaad xaq u leedahay in laguu suubiyo qareen dhibbane oo kharashkiisa waxaa bixin dowlada. Qareenka dhibbanaha wuxuu adiga buu ku caawin iyo ku kaalmeyn inta ey arrinta socoto oo dhan. Nala soo xiriir sidaa warbixin kale kuu siino.
Wada heshiinta wada noolaanshada
Xeerarka wada noolaanshada waxey ku qoranyahiin sharciga isla wada noolanshada oo meeshaas bey ku qorantahay waxyaabaha dhici iyo sida loo kala qeybsan hantida la isla wadaago haddii dadkii isla noolaa ey kala tagi. Sharcigaa waa mid furan oo micnaheeda tahay lagu wada heshiinkaro in lagu dhaqmin xeerarka sharcigaas ku qoran, oo waxaa taasna lagu qori wada heshiinta wada noolaanshada. Wada heshiinta wada noolaanshada waxaa badanaa lagu dhameystiraa wada heshiinta wada lahaanshada iyo warqada dhaxalka sidii kalsooni loo abuuro. Nala soo xiriir sidaa warbixin kale kuu siino.
Wada heshiinta wada lahaanshada
Haddii ujeedada ey tahay in hantida sida guri camala isla wada lahaaneysiin adiga iyo qofkale oo isla markasna gurigaas sharciyan ku qorantahay inuu hal qof kaliya iska leeyahay, waa qasab in la suubiyaa warqada wada heshiinta wada lahaanshada. Warqada wada heshiinta wada lahaanshada waxeey xitaa kala saari kartaa su’aalaha ku saabsan maamulida hantida iyo faa’iidada. Nala soo xiriir sidaa warbixin kale kuu siino.
Warqada deynta waa warqad qoraal oo ballanqaadid inaa bixindoontid wadar lacag ama qoraal aad ku caddeyneysid in deyn lagugu leeyahay. Warqada deynta waxaa lagu qori kara nidaamka deynt bixinta iyo ribada inta ey noqoneyso. Fadlan adiga waa nala soo xiriirikartaa haddii aad dooneysid in lagaa caawiyo suubinta warqada deynta.
Weey wanaagsantahay in dadka dhammaan ey qoran dardaaran – waa arrin aad u fudud! Dardaaranka aad qortay adiga waxaad heli fursad go’aamisid wixii aad ka tagtid sidii loo kala qeybin lahaa. Waa muhiim haddii xitaa aad dooneysid in dhaxalka loo kala qeybiyo sida sharciga uu dhigi, oo sidaas baa dhaxalka uga dhigi mid uu iska leeyahay qofka aad ugu talagashay. Nala soo xiriir oo anaga baa kaa caawin suubinta dardaaran qoran.
Mas’uuliyada waalidnimada, guriga iyo wakhti isla wada qaadashada
Khilaafyada ku saabsan mas’uuliyada waalidnimada oo canuga, guriga canuga ku noolaan iyo xaqa wakhti la qaadashada canuga waa arrimo caadiyan dareemo kicis leh. Sidaas daraadeed bey muhiim u tahay inaa suubsatid wakiil si firfircoon ugu shaqeeyo oo adiga qofka kuu hadlaayo noqdo. Haddii waalidka ey arrintaan ku wada heshiin karin markaas maxkamada baa ku shaqo leh iney arrimahaan go’aamiso, oo markaasna fiirin waxa canuga u wanaagsan. Nala soo xiriir haddii aad dooneysid inaa anaga ku matalno.
Wada heshiinta hantida oo dadka is qabo
Wada heshiinta hantida oo dadka is qabo waxaa la suubinkara inta la guursan ka hore ama inta la isqabo. Haddii labada qof oo is qabo eysan suubsan wada heshiinta hantida oo dadka is qabo wixii hanti ey kala lee yahiin iyo ey isla leeyahiin waxaa lagu kala qeybin kala bar iyo kala bar. Haddii aad dooneysid in dhamaan hantidiina noqoto mid hal qof iska leeyahay ama qeyb kamid ah hal qof iska leeyahay, fadlan soo dhawaada oo nala soo xiriira sidaa idin kugu suubino wada heshiinta hantida oo dadka is qabo.